तीन वटा राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको हिन्दी फिल्म, हेर्नुस् युट्युबमा :: Setopati
सिनेमाको पर्दामा जीवनका सत्यलाई हुबहु उतार्ने दख्खल राख्ने भारतीय निर्देशकको गन्तीमा श्याम बेनेगलको नाम पहिलो पंक्तिमा आउँछ। त्यसैगरी अभिनयमार्फत चरित्रलाई जीवन्त बनाउने अभिनेत्रीमा शवाना आजमीको नाम पहिलो क्रममै लिइन्छ।
यी दुई दिग्गजको भेट 'अंकुर'बाट सुरू भएको हो जुन उनीहरूको पहिलो सिनेमा थियो। व्यवसायिक रूपमा समेत सफल सन् १९७४ को अंकुर तीन विधामा राष्ट्रिय अवार्ड पाउन सफल फिल्म हो। 'कल्ट क्लासिक' मानिने अंकुरलाई भारतीय सिनेमा इतिहासमा समानान्तर वा वैकल्पिक सिनेमाको लहर चलाउने प्रतिनिधि फिल्म मानिन्छ। निर्देशक बेनेगल र अभिनेत्री आजमी अंकुरपछि यो लहर चलाउने दुई प्रतिनिधि नाम हुन्।
कम बजेटका यथार्थवादी धारमा बन्ने फिल्ममा कथा, लोकेसन, संवाददेखि अभिनयसम्म यथार्थपरक हुन्थे। आम र ग्रामीण जीवनका पात्रलाई केन्द्रमा राखिएका यी फिल्मलाई फिल्ममेकर 'ग्ल्यामरस' बनाउनेभन्दा नबनाउने कुरामा सचेत हुन्थे।
अंकुरको कथावस्तु, लोकेसन, पात्रले बोल्ने लवज, पात्रका भेषभूषा र पहिरनमा यस्तै विशेषता पाइन्छन्।
लक्ष्मी र कित्श्या हैदराबाद नजिकको गाउँमा बस्ने तथाकथित तल्लो जातका गरिब दम्पती हुन्। बिहे भएको केही वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरू निःसन्तान छन्। बोल्न-सुन्न नसक्ने अनपढ कित्श्या रक्सीको अम्मली हुन् तर खराब पति होइनन्। त्यसैले लक्ष्मीलाई कित्श्या र आफ्नो जीवनप्रति ठूलो गुनासो छैन। उनको एक मात्र धोको छ, आमा बन्ने।
हैदराबादमा पढेका सूर्य गाउँका जमिन्दारका छोरा हुन्। बुबाको करकापमा सूर्य बिहे मात्र गर्दैनन्, बुबाको कामको जिम्मेवारी लिन पनि बाध्य हुन्छन्। लक्ष्मी र कित्श्याले सूर्यको सेवा गर्ने जिम्मेवारी पाउँछन्। सूर्य बुबाको करकापमा परी आफूभन्दा कम उमेरका सरुसँग बिहे भएको हुन्छ। तर गाउँ पुगेपछि उनी लक्ष्मीको यौवनमा आँखा लगाउन थाल्छन्।
यसका लागि उनले कित्श्यालाई विभिन्न हिसाबले लक्ष्मीबाट टाढा राख्ने जालझेल गर्छन्। यही क्रममा कित्श्यालाई कपाल मुण्डन गरेर गाउँ परिक्रमा गराइन्छ। कित्श्यालाई यो अपमान झेल्न गाह्रो पर्छ। उनी गाउँ छोडेर बेपत्ता हुन्छन्।
श्रीमानको अनुपस्थितिमा सूर्य लक्ष्मीलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न सफल हुन्छन्। सूर्य र लक्ष्मीको सम्बन्धको गाइँगुइँ सूर्यकी श्रीमती सरूसम्म पुग्छ। उनी सूर्यलाई भेट्न आएपछि सूर्य र लक्ष्मीको सम्बन्धले नयाँ मोड लिन्छ। यसैबीच लक्ष्मी गर्भवतीसमेत हुन्छिन्।
सूर्यका बुबाले पनि कौशल्या नामकी युवतीसँग सम्बन्ध गाँसेर अवैध छोरा जन्माएका हुन्छन्। लक्ष्मीलाई जातीय उँचनिचले फरक नपार्ने भन्दै आकर्षित गर्न सफल सूर्यले लक्ष्मीसँगको सम्बन्धलाई वैधता देलान् वा बुबा बाजेकै निरन्तरता दोहोर्‍याउलान्? लक्ष्मीको मनोविज्ञानमा गर्भवती भएपछि कस्तो बदलाव आउला?
यसपछिका घटनाक्रमले दर्शकलाई यस्तै प्रश्नहरूको जवाफतिर लैजान्छ। र, केही थप प्रश्नहरू छाडेर जान्छ।
सोझै विद्रोह नभएर विद्रोहका कम्पन देखाउनु श्याम बेनेगलका फिल्मका विशेषता हुन्। अंकुरमा उनले मालिक तथा सेवकबीचको सम्बन्ध र द्वन्द्वमार्फत अंकुरले सामन्ती मूल्य मान्यता र ग्रामीण उत्पीडनको कथा देखाएका छन्। तत्कालीन भारतीय समाजको सामन्ती प्रथामा आइरहेको फेरबदल, आर्थिक तथा जातीय शोषणको विषय फिल्मको केन्द्रमा छ।
निर्देशक बेनेगलले आफ्ना अन्तर्वार्ताहरूमा फिल्मको कथा वास्तविक घटनामा आधारित रहेको बताएका छन्। कथाजस्तै फिल्ममा ग्रामीण जीवनशैलीको चित्रण पनि जीवन्त छ।
लक्ष्मीको भूमिका निर्वाह गरेकी अभिनेत्री लाजमी अंकुरमा काम गर्ने बेला २३ वर्षकी थिइन्। उनले कम बोल्ने लक्ष्मी पात्रको मनोविज्ञान पर्दामा उतार्न संवादभन्दा हाउभाउ र आँखालाई माध्यम बनाउनुपर्ने थियो। यो चुनौतीलाई उनले गज्जबसँग आत्मसात गरेकी छन्।
त्यसैले पहिलो फिल्मबाटै उनी नेसनल अवार्ड जित्न सफल भइन्। अंकुरमा लक्ष्मीका बोल्न नसक्ने श्रीमानको भूमिकामा साधु मेहरको काम पनि उत्कृष्ट छ। उनले पनि आफ्नो चरित्रबाट उत्कृष्ट अभिनेताको नेसनल अवार्ड जितेका थिए। शबानाजस्तै सूर्यको भूमिका निर्वाह गरेका अनन्त नागको यो पहिलो फिल्म थियो जसमा उनले स्वभाविक अभिनय गरेका छन्।
सन् १९७४ को अंकुरको अभूतपूर्व सफलतापछि निर्देशक बेनेगल र अभिनेत्री आजमीको जोडीले 'निशान्त' र 'मन्डी' जस्ता चर्चित फिल्ममा सहकार्य गरे। भारतबाहिरसमेत चर्चा कमाएको अंकुर 'बर्लिन इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल' मा समेत मनोनित भएको फिल्म हो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १५, २०७८, १८:३३:००